Khayre oo jimicsi u tagay Garoonka Stadium Muqdisho (SAWIRRO) | Dooxo Diaspora Forum - Golaha Qurbo Joogta Dooxa
Home News Khayre oo jimicsi u tagay Garoonka Stadium Muqdisho (SAWIRRO)
Xasan Cali Khayre, Ra’iisal Wasaaraha Somaliya ayaa gelinkii dambe ee maanta jimicsi u tagay Garoonka Stadium Muqdisho, oo dhawaan uu xariga ka jaray Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliya, ka dib markii in muddo ahba dib u habayn ballaaran lagu waday.
Ra’iisal Wasaaraha ayaa la arkaayay isagoo ku rucleynaya Garoonka Stadium Muqdisho, xilli uu barbar ordaayay Wakiilka Midowga Yurub ee Somaliya, Nicolas Berlanga.
“Midowga Yurub wuxuu ku faraxsan yahay inay gacan ka gaysteen dhaqancelinta. Waxaan ku faraxsanahay inaan helno sababihii caadiga ahaa, lagana gudbay bahdilaadda. Ra’iisal Wasaare waad ku mahadsan tahay oradkaagii galabta.” Ayuu yiri Wakiilka Midowg Yurub oo warkan ku sheegay bartiisa Twitter-ka.
Ra’iisal Wasaare Khayre ayaa qoraal uu isna soo dhigay bartiisa Twitter-ka waxaa uu u qornaa “Somaliya waxay u baahan tahay Wada-hawlgalayaal ina garab taagan waqtiyada adag iyo waqtiyada wanaagsanba, kuwaa oo wadaagga himilada xasiloon, barwaaqo iyo midnimaba. Taageerada joogtada ah ee Midowga Yurub ayaad ku aragtay garoonkan burburka illaa dayactirkan cajiibka ah. Orodkeygii ugu horeeyay ayaa halkan waxaa i garab socda Nicolas Berlanga.”